Uncategorized – Garsoore Sports
Saxiixyada Cusub Ee Arsenal,United Oo Ku Dhow Saxiixa Veron, Ali Oo Codsaday PSG & Wararkii Ugu Dambeeyay
Asc, Maalin Wanaagsan. Suuqa kala iibsiga cayaartooyda bisha Janaayo waxaa ka haray 9 cisho, kooxuhuna waxay isku dayayaan iney suuqa ka dukaameystaan waqti hore si aysan degdeg u gelin maalinta ugu dambeysa, haddaba waxaan idiin…
Daafaca kooxda Bayern Munich David alaba ayaa oggolaaday inu u wareego kooxda Real Madrid. Cayaaryahankan ayaa u dhaqaaqi doona kooxda ka dhisan LaLiga ka hor xilli cayaareedka soo aadan. Waxaana lagu wadaa inuu qalinka ku…
Cayaaryahanka kooxda Arsenal Mesut Özil oo lagu wado in wakhti dhow si rasmi ah loogu magacaabo inuu yahay cayaaryahan Fenerbahçe ah ayaa u xiran doona kooxdiisa cusub Maaliyada nambarka 67aad. Xiddigii hore ee kooxda Real…
Daafaca kooxda Athletico Madrid Kieran Trippier ayaa wajahaya 10 isbuuc oo ganaax ah kaddib markii uu hareer-maray shuruucda cayaartooyda ee FIFA. Qamaar shuruucda kahor imanaya ayuu galay xilligii uu kasoo wareegayay kooxda Tottenham (July 2019).…
Daafaca midig ee kooxda Brighton Tariq Lamptey ayaa waxaa ceyrsanaya kooxaha Arsenal, Everton iyo Manchester City, sida uu warinayo The Athletic. Saddexda Premier League ayaa la dhacay qaab ciyaareedka cayaaryahankii hore ee Chelsea oo 20…
Weli si rasmi ah looma shaacin ka tagitaanka Mesut Ozil ee Arsenal oo lagu wado inuu ku biiro kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga , hayeeshee cayaartooyda kooxda Arsenal ayaa isku diyaarinaya inay noolaadaan nolol la’antii…